Kamban-teny ho an'ny tariby
Mpanelanelana amin'ny Pharma
Vitamina sy asidra amino
Seho an'ny orinasa
Labeyond Chemicals Co., Ltd. dia mpamatsy monina any Sina sy mpiara-miasa amin'ny API sy mpanelanelana amin'ny akany, akora Cosmetic Active, vitamina ary akora simika indostrialy, sns.
Tany am-boalohany Labeyond dia mamatsy akora sy mpanelanelana ho an'ny mpanjifantsika any India, nitombo ny orinasa ary nihevitra ny mpanjifa fa hividy vokatra marobe sy isan-karazany avy aminay, ary raisina ho toy ny mpiara-miasa amin'i Shina i Labeyond. Rehefa nandeha ny fotoana dia nitarina tamin'ny firenen-kafa na tsena toa an'i Etazonia, Meksika, Brezila, Eoropa ary Afrika ny orinasantsika.
Labeyond dia manana fifandraisana famatsiana maharitra miaraka amin'ireo mpanamboatra maherin'ny 50 any Shina, ary nanangana toerana famokarana 3 any Jiangsu, Zhejiang ary Sichuan, Sina.
FAMPANDROSOANA INTEGRATED IRAY
Labeyond dia manome famatsiana akora simika iray mijanona iray hitsimbinana ny asa sy ny fandoavana avo roa heny ho an'ny lalànay. Izahay dia miasa amin'ny fampidirana lanja ny mpanjifa etsy ankilany.
QUALITÉ TSY MANOMPOANA
Mino izahay fa ny kalitao no zava-drehetra. Io no singa tokana manan-danja indrindra amin'ny fanapahan-kevitsika rehetra, manomboka amin'ny loharano novidianay, ka hatramin'ny nanateranay azy ireo taminao.
LEHIBE MAIMAIMPOANA NY FANaterana ara-potoana!
Ny fandefasana ara-potoana dia ny olana lehibe indrindra eto an-tananay. Miara-miasa amin'ny mpiasa logistik matihanina kokoa izahay, ary ny mpiasa ao aminay dia mijery 24 ora ny fizotrany.
TSY MAINTSY Hajaina ny CHEMISTRY
Manaja ny Simia izahay, amin'izay tianay. Ny ankamaroan'ny mpiasanay dia fotokevitra mifandraika amin'ny simia. Miasa lalindalina amin'ny indostrian'ny simia izahay mba hanomezana izay takinao.
RM1317 Zhongnan Bldg. A, No. 18 Zhonghua West Road, Ganjingzi Dist. Dalian-116031, Faritanin'i Liaoning, Sina
Antsoy izahay izao: + 86- (411) -86505955
Ho an'ny fangatahana momba ny vokatray na pricelist, azafady avelao ny hafatrao ary izahay dia hifandray aminao ao anatin'ny 24 ora.
Alefaso eto ny fanadihadiana
© Copyright - 2010-2017: Voatahiry ny Zo rehetra.
* CAPTCHA: Safidio azafady ny Truck